ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူး NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူး
Tippett စတူဒီယိုသည်ထူးခြားသည်၊ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများအတွက် CG ဇာတ်ကောင်ကာတွန်းကားကိုအထူးပြုသည့်အနိုင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကုမ္ပဏီ။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Phil Tippett မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်ယခုစတူဒီယိုသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေရှိအရည်အချင်းရှိသောအနုပညာရှင်နှင့်ပညာရှင် ၁၅၀ ကျော်ကိုအလုပ်ခန့်ထားသည်။
ညှိနှိုင်းရေးမှူးသည်အနုပညာရှင်များ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ၊ ထုတ်လုပ်ရေးဌာနနှင့်စတူဒီယို၏ကျန်အချက်အလက်များ၏အဓိကအချက်အချာအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ အနုပညာရှင်အားလုံး၏အချိန်ဇယားကိုသိရှိပြီးနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်များကိုလိုက်နာရန်သေချာသည်။ ဤသည်သည်မြင့်မားသောဖိအားပေးမှု၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ခိုင်မာသောအလုပ်မျိုးစုံနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်သောထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုအခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါသည်ဤအလုပ်၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာဖော်ပြပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ စတူဒီယိုမှဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းအခြားတာ ၀ န်များကိုစီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ခန့်ထားနိုင်သည်။
artists အနုပညာရှင်များ၏နေ့စဉ်တိုးတက်မှုကိုပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ၊ နောက်ဆက်တွဲများနှင့်အလုပ်များသေချာစေရန်အတွက်အစည်းအဝေးများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
•တိကျသော၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်သည့်အစီရင်ခံစာများကို Digital Production Manager နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့သို့ပေးပို့ပြီးတင်းကျပ်သောပို့ဆောင်မှုအချိန်နှင့်တိကျသောထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားသေချာစေရန်။
●အနုပညာရှင်များအားသေနတ်ပစ်အချိန်ဇယားများ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးမှတ်စုများ၊ ပေးပို့သည့်သမိုင်းမှတ်တိုင်များ၊ ရည်ညွှန်းထားသည့်အရာများနှင့်မည်သည့်အလုပ်အတွက်မဆိုလိုအပ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများစသည့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
•နေ့စဉ်သတင်းစာများ၊ Раундများ၊ ဖောက်သည်များပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအစည်းအဝေးများအားလုံးတွင်ရှင်းလင်းသောနှင့်တိကျသောမှတ်စုများကိုယူပြီးလိုအပ်သောပါတီများအားလုံးကိုအချိန်မီဖြန့်ဝေသည်။
•စတူဒီယိုရှိအခြေခံအဆောက်အ ဦး ဌာနအမျိုးမျိုးနှင့်ပြသမှု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အစဉ်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းသည်။
•ဖောက်သည်များနှင့်ရောင်းချသူများထံမှ ftp နှင့် / သို့မဟုတ်ပုံမှန်မေးလ်မှတဆင့်အခါအားလျော်စွာတင်ပို့မှုကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
• render လုပ်သည့်လယ်ယာကိုစောင့်ကြည့်ပြီး Digital rendering Wranglers နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး render လုပ်သည့်အလုပ်အားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြီးအောင်လုပ်ရန်။
•ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သတ်သောအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၂ နှစ်ရှိရမည်။ VFX သို့မဟုတ်ဂိမ်းများသည်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
•ပုံမှန် VFX ထုတ်လုပ်မှုပိုက်လိုင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု။
•အလွန်ခိုင်မာသောစည်းရုံးရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး (စာဖြင့်ရောနှုတ်ဖြင့်ပါ) စွမ်းရည်ရှိရမည်။ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်လုပ်ငန်းများကိုအမျိုးမျိုးထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။
• MS Office နှင့် HTML တို့တွင်ကျွမ်းကျင်ရမည်။ Shotgun, Photoshop နှင့် Unixaplus နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း။
•အားကောင်းသော multi-tasking ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။
• Mandarin စကားပြောခြင်းကိုနှစ်သက်သည်
ဒီအနေအထားကိုစဉ်းစားခံရဖို့, သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့် reel မှလင့်များပါဝင်သည်ပေးပါ။
ဘာသာရပ်လိုင်းထဲတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်ရန်သေချာစေပါ ကျေးဇူးပြု. :
ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - သင်၏အမည်၊ ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူး
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်အလုပ်ဖွင့်လှစ်ဘို့အကောင်းတစ်ပွဲစဉ်များမှာလျှင်, သင်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဆက်သွယ်ပါမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဆက်သွယ်တိုင်းကြိုးပမ်းမှုစေမည်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အဖွင့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု၏မြင့်အသံအတိုးအကျယ်မှကျနော်တို့တိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ဖွင့်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ရှာကြံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များကိုပြန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသို့မဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုပေးရန်။
ဆိုးကျိုးများအပြီး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် photoshop ထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူး ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2020-05-26
ယခင်: တွဲဖက် / ထုတ်လုပ်သူ / ညှိနှိုင်းရေးမှူး / အယ်ဒီတာ Casting